New Zealand Cricket Tour of Zimbabwe In July At Risk of Wellington Ban
Zimbabwe's cricket team faces another political setback with statements this week from New Zealand Prime Minister John Key indicating that his government is considering barring the national cricket team from making a scheduled July tour of Zimbabwe.
New Zealand's Black Caps are booked to play Zimbabwe in three one-day internationals under the International Cricket Council 's future tours program.
Cricket commentator Brian Goredema told reporter Marvellous Mhlanga-Nyahuye of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that a New Zealand decision to bar the tour, following a similar move by Australia in 2007, would set back Zimbabwe's effort to return to test play.
In soccer, meanwhile, Premier League champions Monomotapa and Caps United, respectively, advanced in the CAF Champions League and the CAF Confederation Cup.
Caps United has been drawn to play Egypt's Engineering for the Petroleum & Process Industries team and some African football observers consider that the next best thing to a by for the Zimbabwe team, said sports commentator Michael Kariati.
Interview With Michael Kariati